कर्णाली प्रतिष्ठानमा भयो गर्धनको मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया - Action Khabar - Nepali Online News Portal
कर्णाली प्रतिष्ठानमा भयो गर्धनको मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया
जुम्ला । भर्याङबाट खसेर गर्धनको मेरुदण्ड भाँचिएकाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पहिलो पटक गर्धन (घाँटी)को मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया भएको छ।
जुम्ला तिला गाउँपालिका ७ घोडिसम गाउँका लोकबहादुर रोकायाको प्रतिष्ठानमा सफल शल्याक्रिया भएको हो। प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजनकुमार रोकायाको नेतृत्वमा डा. अर्जुन तिवारी, निराजन महासेठ र डा. रमेश भट्टराईको टोलीले सफल शल्याक्रिया गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
अस्पताल ल्याउने बेलामा छोराको दायाँ हात र दायाँ खुट्टा नचलेको तथा राम्रोसित बोल्ने अवस्थामा पनि नरहेको उल्लेख गर्दै लोकबहादुरका बाबु खुसीलालले छोराको बााच्ने आश मरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुले छोरो बचाइदिएको बताए ।
जेठ ३ गते अस्पताल भर्ना भएका लोकबहादुर उपचारपछि अहिले हिँड्डुल गर्न सक्ने र राम्ररी बोल्न सक्ने भएका छन् । लोकबहादुरले भर्‍याङबाट खसेपछि गाउँको मेडिकलमा तीन दिन उपचार गर्दा कुनै सुधार नभएपछि जुम्ला आएको बताए । ‘मेडिकलले औषध दिएर सुई लगाइदिएको थियो। दुखाई कम मात्र भयो अरु त विसको उन्नाइस भएन । यहाँ आएपछि बाच्ने आशा पलायो ।’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानले यो जटिल प्रकारको शल्यक्रिया भएको बताएको छ । प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रोकायाले कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको अप्रेशन पहिलो पटक गरिएको बताए । ‘यस प्रकारको जटिल शल्यक्रिया भएको थिएन ।’ डा. रोकाया भन्छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्थामा बिरामीलाई एमआरआई गर्नुपर्ने थियो। प्रतिष्ठानमा एमआरआई नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ । बिरामीलाई बाहिरको अस्पतालसम्म पुग्न समेत कठिन देखिएपछि प्रतिष्ठानले ठुलो चुनौतिको सामाना गरेर बिरामीको सफल अप्रेशन गरेको हो ।
शल्यक्रियामा नर्सिङ, आइसीयू, एनस्थेसिया र रेडियोलोजी विभागले राम्रो साथ दिएकाले पनि एमआरआई नगरीकन शल्यक्रिया संभव भएको हो । प्रतिष्ठानले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवाले समग्र कर्णाली प्रदेशका जनता लाभान्वित भइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. रमेश भट्टराईले प्रतिष्ठानमा निकै महत्वपुर्ण शल्यक्रिया भएको बताउँदै दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय उपकरण भए कर्णाली प्रतिष्ठानमा जस्तो सुकै कठिन उपचारहरु गर्न संभव देखिएको बताए ।
प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि एमविविएसको पढाई समेत हुने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठान स्थापनाको १० वर्षपछि २० सिट एमबीबीएस अध्यापन गर्ने अनुमति दिएपछि जुम्ला चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । यो वर्ष कर्णालीले एमविविएसमा २० सिट, बिएनएसमा २० सिट तथा बिफर्मामा २० सिट निर्धारण गरेको छ ।
- ५ असार २०७८, शनिबार ०७:११ मा प्रकाशित